ခြေချောင်းေ လးတွေက ပြော တဲ့ သင့် ရဲ့ စိတ်နေသဘော ထား နဲ့ အစွမ်းသ တ္တိများ – Shwewiki.com
ခြေချောင်းေ လးတွေက ပြော တဲ့ သင့် ရဲ့ စိတ်နေသဘော ထား နဲ့ အစွမ်းသ တ္တိများ
March 10, 2020 By admin Knowledge
ခြေချောင်းေ လးတွေ တစ်ချောင်းခြင်းစီက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့ ကိုယ်ဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြနေတယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါရဲ့လား..? ခြေချောင်း ပုံသဏ္ဍန်အနေအထားတွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး မတူညီတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ ရှိကြပါတယ်။ ခြေထောက်အဖျားပိုင်းရဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ကို ရောမပုံစံ၊ လေးထောင့်ပုံစံ၊ ဂရိပုံစံနဲ့ ဖြန့်ကျက်ပုံစံ ဟူ၍ (၄)မျိုး ခွဲခြားထားပါတယ်
(၁) ရောမပုံစံ ခြေထောက်
ခြေချောင်းအားလုံးထဲမှာ ခြေမက သိသိသာသာအကြီးဆုံးဖြစ်နေပြီး ကျန်တဲ့ခြေချောင်းလေးတွေက အချိုးညီစွာ ရှိနေမယ်ဆိုရင် “ရောမခြေထောက်” အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုခြေထောက်မျိုးပိုင်ရှင်ဟာ ဖော်ရွေတတ်သူဖြစ်ပြီး၊ သြဇာညောင်းသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းတဲ့သူဖြစ်ပြီး လူတွေအများကြီးရှေ့မှာ စကားပြောကောင်းတဲ့သူလည်းဖြစ်လို့ ဒီလိုခြေထောက်ပိုင်ရှင်များဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ် …။
(၂) လေးထောင့်ပုံစံ ခြေထောက်
ခြေချောင်းလေးတွေအားလုံးကို စုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း လေးထောင့်ကျနေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာ အေးဆေးပြီးတော့ ဉာဏ်ပညာကြီးမားသူတွေ ဖြစ်တဲ့အပြင် အလိုလို ထိုးထွင်းသိစိတ်ရှိတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အရမ်းလေးနက်ခက်ခဲတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချရတော့မယ့် အချိန်မှာ အဲဒီအစွမ်းသတ္တိတွေ အလိုလိုရလာတတ်သူပါ။ သူတို့တွေဟာ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါတိုင်း အနားမှာကူညီပေးဖို့ အသင့်ရှိနေတတ်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ် …။
(၃) ဂရိပုံစံ ခြေထောက်
ခြေညိုးက ခြေမထက်ပိုပြီး ရှည်ထွက်နေသူတွေကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ ဒီလိုခြေထောက်ပိုင်ရှင်ကတော့ ဘယ်အရာကို လုပ်လုပ် စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ တစ်စိုက်မှတ်မှတ် လုပ်တတ်တဲ့သူမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် သူတို့ကို အားကစားသမား၊ နိုင်ငံရေးသမား၊ အနုပညာသမား နဲ့ တီထွင်ဖန်တီးသူတွေအဖြစ် တွေ့မြင်နိုင်ပြီး သဘာဝအရ ဦးဆောင်နိုင်သူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ် …။
(၄) ဖြန့်ကျက်ပုံစံ ခြေထောက်
ခြေချောင်းလေးတွေဟာ တစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်း နီးကပ်စွာရှိပြီး ခြေမ ကစလို့ ခြေသန်းထိ တစ်ဖြည်းဖြည်းသေးသွားတဲ့ ခြေချောင်းပိုင်ရှင်ကို ဖြန့်ကျက်ပုံစံအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒီလို ခြေထောက်ပုံစံပိုင်ရှင်မှာ သူများနှင့်မတူပဲ ထူးခြားတဲ့စရိုက်လက္ခဏာတွေရှိပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ စိတ်လိုက်မာန်ပါ ပြောတတ်ဆိုတတ်၊ ပြုလုပ်တတ်သလို အတော်လေး ခန့်မှန်း နားလည်ရခက်တဲ့ လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ တစ်ဦးတည်း သီးသန့်အေးဆေးနေတတ်သူဖြစ်ပြီး ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးနေရတာကို လုံးဝမနှစ်သက်သူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုသီခြားနေရတာကိုလည်း အလွန်တန်ဖိုးထားကြသူမျိုးဖြစ်ပါတယ် …။
ခြေချောင်းများစုစည်းမှု ပုံစံများက စိတ်နေစိတ်ထားကို ပြောပြနေသကဲ့သို့ ခြေချောင်းတစ်ချောင်းခြင်းစီရဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ကပါ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမှုတွေ ခြားနားပါသေးတယ် …။
အကယ်၍ ခြေမဟာ အခြားခြေချောင်းတွေထက် ပိုပြီးရှည်ထွက်နေမယ်ဆိုရင် လိမ္မာပါးနပ်သူဖြစ်သလို တီထွင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ စိတ်ကူးမျိုးရှိသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာတစ်ခုကို ထူးခြားတဲ့ ဖြေရှင်းနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းတတ်သူပါ။ သူများနဲ့မတူတဲ့ ရှုထောင့်အမြင်မျိုးက ကြည့်တတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ် …။
အကယ်၍ ခြေမဟာ သိသိသာသာ သေးငယ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သူများတွေ လက်ဖျားခါရလောက်အောင် အလုပ်ပေါင်းစုံကို တစ်ပြိုင်နက် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ စိတ်ကူးအကြံအစည်ကို သူတစ်ပါးလက်ခံလာအောင် ဖော်ဖော်ရွေရွေအပြုံးလေးတွေနဲ့ သိမ်းသွင်း စည်းရုံးနိုင်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ် …။
ညာဘက်ခြေထောက်ရဲ့ ခြေညိုးက သင့်ဘဝမှာ ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာကို ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ ခြေထောက်ချကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ညာဘက် ခြေညိုးက ကြမ်းပြင်နဲ့ ထိနေတယ်ဆိုရင် သင်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်း ဖြစ်နေသူဖြစ်ပါတယ် …။
အကယ်၍ ကြမ်းပြင်နဲ့မထိတာ ဒါမှမဟုတ် ခြေညိုးနဲ့ ခြေခလယ်ကြားမှာ အတော်လေး ခြားနေမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ စိတ်နောက်ကိုယ်ပါ မဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ခြေညိုးဟာ ပိုရှည်လေ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု စွမ်းရည်မြင့်မားလေပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။
ခြေခလယ်ဟာ သိသိသာသာ ရှည်လျားနေမယ်ဆိုရင် စိတ်ခွန်အားကောင်သူဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ခြေခလယ်ပိုရှည်လေ အသက်မွေးမှုလမ်းကြောင်းမှာ အောက်မြင်မှု ပိုရလေ ဖြစ်ပါတယ် …။
ခြေသန်းကြွယ်ကတော့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို ဖော်ပြနေပြီး၊ ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ် ရှည်ထွက်နေရင်တော့ မိသားစုဟာ သင့်ဘဝအတွက် အရေးအကြီးဆုံး နံပါတ်တစ်လို့ သတ်မှတ်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝမှာ ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ အဆင်မပြေတတ်တဲ့သူတွေရဲ့ ခြေသန်းကြွယ်က ကောက်ကွေးနေတတ်ပါတယ် …။
ခြေသန်းသေးသေးလေး ပိုင်ဆိုသူတွေကတော့ ငြီးငွေလွယ်သူတွေဖြစ်ပြီး ရယ်ရွှင်မြူးစရာ စိတ်အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စရာလေးတွေနောက်ကို မနားတမ်းလိုက်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပျော်စရာလေးတွေ ရတတ်ပါတယ် …။
အကယ်၍ ခြေသန်းလေးကို ခြေသန်းကြွယ်နဲ့ မထိအောင်၊ ကွာအောင် ဖြန့်ကားနိုင်သူဆိုရင်တော့ စိတ်လိုက်မာန်ပါပြုတတ်တယ်၊ စွန့်စားတတ်တယ်၊ စိတ်ကစားတတ်တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ကွာအောင် မဖြန့်ကားနိုင်သူဆိုရင်တော့ သမားရိုးကျသမား၊ ကြိုတင်မှန်းဆတတ်သူနဲ့ သစ္စာရှိသူအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါတယ် …။
ဒါတွေကတော့ ခြေချောင်းလေးတွေက ပြောပြတဲ့ သင့်ရဲ့ စိတ်နေသဘာဝနဲ့ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်သတ္တိများပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရော ဘယ်လိုလူမျိုးလည်း နံပါတ် ၁ လား.? ၂ လား.? ၃ လား.? ၄ လား.? ဆိုတာ ပြောခဲ့ပါအုံးနော် …။ ။
လူ၁၀၀ မှာ ၉ ၈ ယောက်လော က် အဖြေမှန်မရ တဲ့ သင်္ချာပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်
ပိုးကြာဖြူခင် ကို ပရိ သတ်တွေ အားပေးကြမ်း လို့ လုံခြုံေ ရးတွေ စောင်ခြုံခိုင်းပြီး ပွဲဈေးတန်းထဲက ခေါ်ထုတ်ခဲ့ရ